रोपाईं हुनुअघि नै धानको समर्थन मूल्य तोकियो - ४ असार २०७७, NepalTimes
रोपाईं हुनुअघि नै धानको समर्थन मूल्य तोकियो
सरकारले रोपाईं हुनुअघि नै यस वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक रोपाईं सुरु हुनुभन्दा पहिले नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको हो । मध्यम धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ र मोटा धानको समर्थन मूल्य दुई हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए ।
पहिलोपटक रोपाईं हुनुभन्दा पहिले नै धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि किसानका लागि बचत सुनिश्चित भएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ । किसानले व्यवसायीलाई बिक्री गर्न नसके सरकारी कम्पनीले खरिद गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा समेत समर्थन मूल्य तोकिएको बालीको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख छ । उत्पादन गरेको बाली बिक्री नभए सरकारले खरिद गर्ने सुनिश्चित भएपछि किसानले ढुक्कका साथ उत्पादनका लागि लगानी गर्ने र त्यसले कृषि उपज उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने मन्त्रालयको दावी छ ।
अब के गर्लान् ओली ? यस्ता छन् सम्भावित ४ कदम
किन सलबलाए राजावादी ?
बैठक स्थगन गरेर नेकपाका दुवै समूह शक्तिसंचयतिर
हेरचाह केन्द्र नहुँदा जेल पठाउनुपर्ने बाध्यता
राष्ट्रसंघको आज र भोलि हुने विशेष महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै
विश्वकप आयोजक कतारको एसियन गेम आयोजना गर्ने इच्छा
विवेकशीलका १३ नेता साझा पार्टीसँगको एकतामा सहभागी नहुने
राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शितल निवासमा
पौडेललमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति, दोषीलाई कारबाही गर्न माग
विदेश जानेले अनलाइनबाटै म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने
निषेध गरिएका सेवा तथा व्यवसाय अझै १५ दिन यथावत
सुनको भाउ प्रतितोला १ हजार ६ सयले बढ्यो